Ngwa igwe mgbere ahịa ọ ga - abụ ihe na - eme n’ọdịniihu?
Na-ekpe ikpe site na mmepe nke igwe ndị na-ere ahịa, ha pụtara dị ka mgbanwe nke usoro ọrụ nrụpụta ọrụ na-arụ ọrụ nke ọha na eze na teknụzụ. Nnukwu ihe oriri na oriri na mgbanwe nke usoro oriri na ahịa na-achọ ọwa mgbasa ọhụụ, ebe ụgwọ ọrụ maka nnukwu ụlọ ahịa ọdịnala, ụlọ ahịa ngalaba na usoro ọhụụ ọhụụ ndị ọzọ na-arị elu, yana mmachi sitere na saịtị, ịzụ ahịa dị mma na ihe ndị ọzọ, igwe na-ere ahịa na-abụghị ndị bịara dị ka ihe dị mkpa.
N'ihe banyere ịnye igwe na-ere ahịa nwere ike ime ka ụkọ ego ụmụ mmadụ zuru oke ma gbanwee maka mgbanwe nke usoro oriri na usoro oriri. Ebe enweghị ego dị mkpa na ịbụ ndị na-erughị ohere, ndị na-ere ahịa elekere 24 nwere ike ịdị na-azọpụta ọrụ karịa, na-adọrọ mmasị karị iji kpalie ọchịchọ ịzụ ahịa yana ezigbo ihe ngwọta maka ụgwọ ọrụ na-arị elu.
Vending igwe ụlọ ọrụ na-akpụ akpụ kwupụta ozi technology na n'ihu echiche. Mmepe ya agbadoro ichekwa ike, igwe na-a energyụ ihe ọverageụverageụ ndị na-a energyụ ihe ike abụrụla isi ụlọ ọrụ ahụ, igwe ọrụ ndị a nwere ike ime ka ihe ọ beụ beụ ndị ahụ dị jụụ ọbụlagodi mgbe agbanyụrụ igwe nju oyi, na-echekwa ọkụ eletrik 10-15% site na igwe ahịa ọdịnala. Igwe na-ere ere ga-abụ ihe nchekwa nchekwa na arụmọrụ na-arụ ọrụ ka anyị banyela 21st narị afọ.
Akpaaka bụ ihe a na-apụghị igbochi, anyị'Aga m ahụ ihe ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi na-edochi ọrụ ọdịnala, ma n'ichepụta, ịrụ ọrụ ma ọ bụ na-ere ahịa, atụmanya nke ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-enwu gbaa n'okpuru ọnọdụ ndị a.